हिल्सचर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू उच्चतम उद्योग मापदण्डहरूमा निर्मित छन्। यदि तपाईं कुनै समस्या वा दोष सामना गर्नु पर्छ, कृपया हामीलाई भन्नुहोस्! हाम्रो समर्थन टोली तपाईको अल्ट्रासोनिक युनिट फेरि चाँडै चलाउन सहयोग गर्न खुशी हुनेछ।
स्व निदान प्रदर्शन गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो अल्ट्रासोनिक यन्त्रको साथ कुनै पनि समस्याको सामना गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ एक सरल आत्म निदान गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया निम्न पूर्वाधार जाँच गरी निदान तयार गर्नुहोस्।
कृपया म्यानुअल्स र अल्ट्रासोनिक उपकरणको टेक्निकल स्पेसको साथ परिचित गर्नुहोस्। यदि तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरणमा टच स्क्रिन छ भने, हामीले एसडी कार्डमा म्यानुअल्सहरूको एक नरम-प्रतिलिपि प्रदान गर्यौं जुन तपाईंको एकाइसँग हुन्छ।
सबै उपकरण भागहरू, केबल्सहरू र प्लगहरू सूखा र दृश्य दोषहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ।2मीटर भन्दा बढी लम्बाइहरूको केबलहरू अनलक गर्न सकिन्छ।
सबै प्रशंसक आउटलेटहरू ब्लक गर्न सकिँदैन। कृपया तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरणको लागि अधिकतम परिवेशको तापमानको सन्दर्भमा मैनुअललाई संकेत गर्नुहोस्। यन्त्र इलेक्ट्रोनिक्स वा प्लग भित्र गीला वा नमी हुनु हुँदैन।
तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरणलाई नामित भोल्टेजको पावर आउटलेट र पर्याप्त एपर्मेन्टमा जडान गर्नुहोस्। ढिलो अभिनय फ्यूसन सिफारिस गरिन्छ।
यदि तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरणमा एसडी कार्ड स्लॉट छ भने, कृपया लिखित-संरक्षण बिना एसडी कार्ड स्थापना गर्नुहोस्।
कृपया विनोद्रोड, बूस्टर र सींगलाई सावधानी वा क्षतिका लागि निरीक्षण गर्नुहोस्। सक्रिय सतहहरु मा खनिज फिटिंग सामान्य पहनने र अल्ट्रासोनिक cavitation को परिणामस्वरूप आंसू छ।
सम्पर्क सतहहरु र सोनोटरोड को धागे, बूस्टर र सींग साफ हुनु पर्छ, सूखा र दोषहरु बाट मुक्त। इथेनॉलको साथमा सतहहरू सफा गर्नुहोस् र घुमाउन अघि सुत्न दिनुहोस्।
सोनोट्रोडलाई धेरै बलियो माउन्ट गर्नुहोस्। कृपया मैन्युअलमा निर्देशनहरू हेर्नुहोस्। सोनोट्रोड र प्रवर्द्धनको तंग बढ्दो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यदि तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरणमा टच स्क्रिन रहेको छ भने कृपया सेटिङ्हरू जाँच्नुहोस् र क्यालिब्रेसन रिसेट गर्नुहोस्। कृपया सही समय र मिति सेट गर्नुहोस्।
कृपया 100% र चक्रमा 100% सम्म आयाम समायोजन गर्नुहोस्।
एक बेकर वा बाल्टी तयार पार्नुहोस् ट्याप पानीको साथमा तपाईंको सोनोट्रोड आकार उपयुक्त हुनेछ। पानीको कोठाको कोठा हुनुपर्छ।
कान सुरक्षा र चश्मा पहन्नुहोस्! तपाईंको sonication प्रणाली को लागी अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को आवश्यकता हुन सक्छ।
अब, कि सबै आवश्यकताहरू भेटिए, कृपया निम्न गर्नुहोस्।
अल्ट्रासोनिक उपकरण हावामा सुरू गर्नुहोस्।
यदि अल्ट्रासोनिक यन्त्र अप सुरु हुन्छ, कृपया वाटमा सञ्चालन शक्तिलाई ध्यान दिनुहोस्। सबै अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू पावर मीटरको साथमा वा टच स्क्रिनमा पावर प्रदर्शनको साथ आउँछन्।
यदि यन्त्रले ठूलो आवाज बनाउँछ वा यदि यो पल्स सुरु हुन्छ भने कृपया यसलाई ध्यान दिनुहोस्। छोटो भिडियो अनुक्रमले हामीलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
यदि अल्ट्रासोनिक यन्त्र सुरू गर्दैन भने, यदि उपलब्ध भएमा फरक फरक सोनोट्रोड माउन्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि दोहोर्याउनुहोस्।
यदि अल्ट्रासोनिक यन्त्र अझै हावामा सुरु हुँदैन भने कृपया यहाँ रोक्नुहोस् र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि अल्ट्रासोनिक यन्त्र हावामा चलिरहेको छ भने, त्यसपछि बिस्तारै पानीमा भाइब्रेट सोनोट्रोड विच्छेद गर्नुहोस्। तरल स्प्रे हुन सक्छ। टच स्क्रीनमा पावर मीटर वा पावर डिस्प्लेमा हेर्नुहोस्। अल्ट्रासोनिक पावर माथि जानुपर्छ, किनकि तपाईंले पानीमा गोल्डोट्रोड गहिरो बिर्सनु भयो।
यदि अल्ट्रासोनिक उपकरणले पानीको साथ सोनोट्रोडको पहिलो सम्पर्कमा रोक्छ भने उपलब्ध भएमा एक फरक सोनोट्रोड वा बूस्टर माउन्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि दोहोर्याउनुहोस्।
यदि तपाईंको अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू पावर स्तरमा रोकिएको छ भने, त्यो नामावली शक्तिभन्दा कम छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कृपया कुनै पनि स्थिति वा त्रुटि सन्देशहरू याद गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरण पूर्ण शक्तिमा चल्छ भने सोनोट्रोड पुरा तरिकाले डुबेर छ, कृपया यसलाई5देखि 10 मिनेट सम्म चलाउन दिनुहोस्। ठूला अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूको लागि खण्डको प्रयोग सिफारिस गरिएको छ।
यदि माथिका चरणहरूले तपाईंको समस्या समाधान गर्दैन भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! कृपया हामीबाट पछि तपाईले सुन्नु भन्दा पहिले मर्मत गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। कृपया हामीलाई तपाईंको अल्ट्रासोनिक सेटअप र तपाईंको समस्याको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। कृपया हामीलाई तलका जानकारीहरू पठाउँदै तपाईंलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्नुहोस्! हाम्रो समर्थन टीम सकेसम्म छिटो सम्पर्कमा तपाईंसँग आउँनेछ!
कृपया हामीलाई आफ्नो उपकरण क्रमिक संख्या प्रदान गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग टच स्क्रिन भएको उपकरण छ भने, कृपया सेटिङहरूमा जानुहोस् र जानकारी खण्डमा स्क्रोल गर्नुहोस्। कृपया हामीलाई हार्डवेयर र सफ्टवेयरको संस्करण संख्या पनि पठाउनुहोस्।
कृपया तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरण, सहायक उपकरणहरू र तपाईंको पूर्ण सेटअपको धेरै तस्विर लिनुहोस्। यसमा सेटअपको तस्वीर समावेश गर्नुपर्छ जसमा समस्या हुन्छ। सोनोट्रोडे सतहहरूमा cavitational फिटिंगको चित्रले हामीलाई यसको पहना र आँसुको अनुमान लगाउन अनुमति दिन्छ।
कृपया हामीलाई तपाईंको समस्याको विस्तृत विवरण र तपाइँले देख्नुहुने कुनै पनि त्रुटि सन्देशहरू पठाउनुहोस्।
समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा वर्णन गर्नुहोस्। यसमा हानिकारक सामग्री, जस्तै तापमान, तरल प्रकार, भिषासिस, भोल्युम र तरल दबाब समावेश हुनुपर्छ। यदि तपाइँ एक पंप प्रयोग गर्नुहुन्छ, टाइप गर्नुहोस् र बनाउनुहोस् र तस्वीर समावेश गर्नुहोस्।
तस्बिर वा छोटो भिडियो अनुक्रम लिनुहोस् जुन यसले गर्दा समस्या वा त्रुटि सन्देश देखाउँछ।
यदि तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरणमा एसडी कार्ड छ भने, कृपया हामीलाई CSV-फाइलहरू जो समस्या निवारणको क्रममा रेकर्ड गरिएको थियो, हामीलाई पठाउनुहोस्, जब तपाईंको समस्या भयो। यदि उपलब्ध छ भने अन्तिम sonication दौडको एक CSV फाइल, समस्या भयो।
हामीलाई जानकारी पठाउँदा, कृपया संलग्न फाइलको आकार6MB तल राख्नुहोस्। यदि आवश्यक भए जिप-सम्पीडन प्रयोग गर्नुहोस्।
प्राविधिक सहयोग अनुरोध फारम
कृपया तल फारम गर्नुहोस् वा ई-मेल पठाउनुहोस् service@hielscher.com मा संलग्नकहरूको साथ
मर्मत गर्नुहोस् बदल्नुहोस्
एक दोष धेरै वर्षको भारी प्रयोग पछि देखा पर्दछ भने, यो हिल्सचर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू तिनीहरूलाई बदल्नुको सट्टा मर्मत गर्न राम्रो समझ राख्दछ। मर्मत गर्न पर्याप्त कम स्रोतहरू आवश्यक छ र वातावरण मैत्री छन्। हाम्रो प्राविधिक समर्थन टोली तपाईलाई कुनै पनि सूचना समस्याग्रस्त शुटि or वा मर्मतको लागि सहयोग पुर्‍याउँछ। वर्किंग हिल्सचर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको उपकरण प्लेटफर्म वा ईबेमा राम्रो पुन: बिक्री मूल्य हुन्छ। उद्यमीहरू र टेक्नोलोजी स्टार्ट-अपहरू लगातार प्रयोग गरिएको हिल्सचर उपकरणहरू खोज्दैछन्। यदि तपाइँसँग तपाइँको अल्ट्रासोनिक homogenizer को लागी अगाडि कुनै उपयोग छैन भने यसलाई एक स्थानीय कलेज वा विश्वविद्यालयलाई दान गर्न विचार गर्नुहोस्। यसले त्यहाँ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूको लागि विश्वव्यापी पावर प्लगहरू
UPcontrol V2.3 WIN – पीसी-इन्टरफेस
हेलसिचेस्टर क्यास्काट्रोड – उच्च सतह सोनिकेशन जांच
निकासीको लागि UIP2000hdT को स्थापना
14513 टेलटो, जर्मनी
टेल: +49 3328 437-420
कृपया तपाईंको अल्ट्रासोनिक उपकरण नियमित रूपमा राख्नुहोस्।